Miantso ny fandefasana, ny siansa momba ny fanapahana - AfricaArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda on 3rd August 2021 3rd August 2021
Ny ekipa ao amin'ny AfricaArXiv dia faly milaza fa miara-miasa izahay Masakhane hanangana vatan'ny fikarohana afrikana mifanila amin'ny fiteny maro avy amin'ny fandikan-teny ny sora-tanana fikarohana natolotra an'i AfricaArXiv. Amin'ireo lahatsoratra natolotra, ny ekipa ao amin'ny Masakhane sy ny AfricaArXiv dia hisafidy hatramin'ny 180 ny totalina amin'ny fandikana azy.
Avy amin'ny fanambarana fanampiana:
'Raha resaka fifandraisana siantifika sy fanabeazana no zava-dehibe amin'ny fiteny. Ny fahafahan'ny siansa horesahina amin'ny fiteny indizeny ao an-toerana dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fanitarana fahalalana ho an'ireo izay tsy mahay miteny anglisy na frantsay ho fiteny voalohany, fa afaka mampifangaro ireo zava-misy sy fomba siansa amin'ny kolontsaina izay nolavina tao amin'ny lasa Noho izany, ny ekipa dia hanangana vatan-kazo mifanila amin'ny fiteny maro amin'ny fikarohana afrikana, amin'ny alàlan'ny fandikana ireo taratasim-pikarohana praprint afrikana navoaka tamin'ny AfricaArxiv tamin'ny fiteny afrikanina miisa 6: isiZulu, Sotho Avaratra, Yoruba, Hausa, Luganda, Amharic. '
Vakio kokoa ao amin'ny: www.masakhane.io/lacuna-fund/masakhane-mt-decolonise-science
Mba handefasana ny sora-tànanao (paositra, paositra, na toko boky) dia fenoy ny takelaka ao amin'ny bit.ly/decol-sci
Raha manao fandefasana vaovao ianao, ireto torolalana manaraka ireto dia hanampy anao handefa tsara amin'ny AfricaArXiv amin'ny Zenodo:
Visit zenodo.org/communities/africarxiv/ ary fisoratana anarana / fisoratana anarana amin'ny fampiasana ny ORCID
Raha tsy manana ORCID ianao dia tsidiho orcid.org/ hahazoana iray
Miverina amin'ny zenodo.org/communities/africarxiv/, tsindrio ny bokotra maitso mampakatra
Ampiharo ny licence CC BY 4.0 amin'ny lahatsoratrao
Fenoy ny fizotry ny fampakaranao
Ampio ny rohy amin'ny fampakaranao ao amin'ny endrika google hamenoana ny fandefasana anao amin'ilay tetikasa
Raha mila fanampiana ianao dia mifandraisa submit@africarxiv.org
Ny fandefasana anao dia hojerena raha adika mifototra amin'ireto fepetra manaraka ireto:
Ny lohahevitry ny fikarohana mahaliana sy azo ampiharina ho an'ireo mpianatra nahazo diplaoma tamin'ny taona 1
Fitsinjarana fitsipi-pifehezana manerana ilay faty
Fitsinjaram-paritany isaky ny toerana voalohany misy ny mpanoratra sy ny zom-pireneny
Azonao atao ny mandefa ny asanao amin'ny teny anglisy, frantsay, arabo, na portogey.
Ny sora-tanana rehetra natolotra dia zaraina imasom-bahoaka amin'ny fiteny tany am-piandohana miaraka amin'ny DOI (identifier object digital) ary ambanin'ny lisansa CC BY 4.0. Hampahafantarinay ny mpanoratra ireo sora-tanana nosafidina ho adika.
Inona no atao hoe preprint?
Ny preprint dia sora-tanana siantifika izay nampakarin'ny mpanoratra tamina mpizara ho an'ny daholobe. Ny preprint dia misy data sy fomba fa mbola tsy neken'ny journal. Hamaky bebe kokoa
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fizarana ny sora-tananao ho preprint?
Mametraha laharam-pahamehana amin'ny fikarohana
Nahazo DOI ilay lahatsoratra mba hanao azy ho cudit
Homena alalana amin'ny Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) fahazoan-dàlana
Asandrato ny mombamomba anao amin'ny maha mpikaroka afrikanina anao sy ny andrim-pampiantranoanao
Mbola azoko atao ve ny mamoaka ny lahatsoratro ao anaty diariny aorian'ny famoahana azy ireo ho toy ny fanomanana mialoha?
Ie. Aorian'ny fandefasana ny preprint anao any amin'ny AfricaArXiv ao amin'ny Open Access repository izay nofidinao, ity no azonao atao hanapahana hevitra hoe journal Open Access aiza no handefasanao ny sora-tananao. Mandehana any amin'ny thinkchecksubmit.org ary araho ny boaty. Ho fanampin'izay, afaka mampiasa ianao Open Journal Matcher ary Directory of Open Access Journals manapa-kevitra amin'ny diary mety amin'ny sora-tanana nataonao.
Sokajy:	FampandrenesanaFomba fiteny
Tags: Siansa momba ny fanapotehanaTahiry LacunaMasakhaneMandika Siansafandikan-teny
Fiteny afrikanina hahazoana teny siantifika voarindra kokoa - Fianarana ny milina	· 18 Aogositra 2021 amin'ny 8:17 hariva
[…] Ny olona dia miteny miaraka amin'ny olona manodidina ny 98 tapitrisa. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia niantso fangatahana avy amin'ny mpanoratra liana ny AfricaArXiv handinika ny taratasin'izy ireo ho adika. 20 ny fe-potoana farany […]
Fiteny afrikanina hahazoana teny siantifika voafintina kokoa | Tatitra Vaovao Androany	· 18 Aogositra 2021 amin'ny 10:08 hariva
[…] Ny fiteny dia am-bava ataon'ny olona manodidina ny 98 tapitrisa. Tany am-piandohan'ity volana ity dia nitaky fangatahana avy amin'ny mpanoratra tsy manaja ny AfricaArXiv amin'ny fitondrana ny taratasin'izy ireo iniana atao handika. 20 ny fe-potoana farany […]
Les leses les africaines pour obtenir plus de termes scientifiques sur mesure -Ecologie, science - ecomag	· 18 Aogositra 2021 amin'ny 11:11 hariva
[…] Sont parlées fiaraha-mientana 98 XNUMX tapitrisa isan-olona. Plus tôt ce mois-ci, AfricaArXiv appel à soumissions d'auteurs intéressés à ce que leurs lahatsoratra soient pris en compte pour la traduction. La […]
Fiteny afrikanina hahazoana teny siantifika miharo be kokoa - Techbyn	· 19 Aogositra 2021 amin'ny 12:13 maraina
Fiteny afrikanina hahazoana teny siantifika voajanahary kokoa - Languages ​​Nova	· 19 Aogositra 2021 amin'ny 12:31 hariva
[…] Ny olona dia miteny miaraka amin'ny olona manodidina ny 98 tapitrisa. Tany am-piandohan'ity volana ity dia niantso fangatahana avy amin'ny mpanoratra liana ny AfricaArXiv handinika ny taratasin'izy ireo ho adika. 20 ny fe-potoana farany […]